Fitsangatsanganana an-tsokosoko: mankalaza jobily volafotsy i Silversea
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana an-tsokosoko: mankalaza jobily volafotsy i Silversea
Jona 4, 2019
Silversea Cruises dia manompo mandritra ny 25 taona amin'ny làlana fitsangantsanganana an-dranomasina lafo vidy. Silversea dia namaha ny hatsaran-tarehin'izao tontolo izao ho an'ny vahiny efa ho antsasaky ny tapitrisa amin'ny diany 4,100 eo ho eo. Ny sambon'i Silversea dia nahavita nahatratra 47,800 andro fitsangantsanganana an-dranomasina, raha ny mpitsidika ny sambo fitsangantsanganana kosa dia nanao dia lavitra nandritra ny 9.4 tapitrisa andro ny fitetezam-paritany.
Mitondra zava-baovao amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana miaraka amina fotokevitra tena mpisava lalana, Silversea no tsangantsangana fitsangatsanganana an-tsokosoko voalohany indrindra manerantany tamin'ny nanombohany ny taona 1994. Silver Cloud namboarina ho tanjona - sambo voalohany an'ny sambo fitsangantsanganana, izay niavaka tsy manam-paharoa toy ny rehetra. ny suite dia nahitana lavarangana manokana - natao Batemy tany Monaco tamin'ny 30 Mey 1994, nanatrehan'ny printsy HSH Prince Albert II an'ny Monaco. Nanomboka tamin'izay, ny vahinin'i Silversea dia nandeha nitety ireo toerana niavaka indrindra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny fampiononana tsy manam-paharoa, nankafy ny serivisy natao manokana sy ny rivo-piainana akaiky teo an-tsambo. Lafiny maro amin'ilay sambo fitsangantsanganana no nivoatra tao anatin'ny 25 taona lasa, saingy nijanona ireo fotokevitra fototra ireo ary ankehitriny dia mampiavaka ny fitsangantsanganana an-tsambo Silversea.
Rehefa natsangan'ny fianakaviana Lefebvre i Silversea 25 taona lasa izay, ny fahitana dia ny hanangana sambo fitsangantsanganana izay tena nahatratra izao tontolo izao, amin'ny hevitry ny vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hahita ny faritra lavitra indrindra sy malaza indrindra eto an-tany amin'ny fampiononana lehibe, miaraka amin'ny karazana fahaiza-manao toerana maro karazana. Tanteraka tamim-pahombiazana io fahitana io, satria ny Silversea dia mamoha traikefa amin'ny fitsangatsanganana lalina ho an'ny vahiny amin'ny toeran-kaleha maherin'ny 900, manomboka amin'ny tsatokazo ka hatramin'ny tendrontany iray hafa - mihoatra noho ny sambo fitsangantsanganana hafa rehetra.
Ny fahaiza-manaon'ny tanjona dia nampiavaka an'i Silversea Cruises hatrizay, saingy ny fanombohana ny Silversea Expeditions tamin'ny taona 2008 izay nanosika ny faran'ny fikarohana tsy lavitra noho ny hitan'ny indostria lafo vidy indrindra: ny dia an-tongotra an-tampon-tany dia ahitana an'i Antarctica tamin'ny 2008; ny morontsiraka andrefan'i Afrika sy ny Artika Rosiana amin'ny taona 2012; Micronesia, Melanesia ary Polynesia tamin'ny 2013; ny Nosy Galapagos, ny Farany Atsinanana Rosiana, ny morontsirak'i Kimberley, ary ny fiampitana andrefan'ny Northwest Passage voalohany tamin'ny 2014; ary Bangladesh amin'ny taona 2017. Amin'ny taona 2019, ny vahinin'i Silversea dia hamakivaky ny Northeast Passage voalohany, raha ny sambo fitsangantsanganana kosa dia ny Expedition World Cruise voalohany eran-tany amin'ny 2021. Ny fitarihan'i Silversea any amin'ny faritra malaza kokoa, toa ny Mediteraneana sy ny Karaiba ihany koa dia mijanona ho matanjaka toy ny taloha ary miorina amin'ny traikefa amin'ny dia lalina.
Avy amin'ny sambo iray monja tamin'ny taona 1994, ny vahinin'ny Silversea dia mankafy sambo sambo manankarena sivy sy be mpitia indrindra ary sambo dimy fanampiny no eo am-pilaminana. Taorian'ny fanombohan'ny Silver Cloud tamin'ny taona 1994, dia natokafan'ny Silver Wind ny fahafahan'ny sambo fitsangantsanganana tamin'ny 1995. Silver Shadow sy Silver Whisper dia natomboka tamin'ny taona 2000 sy 2001. Silver Explorer, sambo mpitsangantsangana voalohany an-dranomasina, nanokatra traikefa momba ny dia an'izao tontolo izao ho an'ny vahiny nanomboka ny taona 2008. Nanatevin-daharana ireo andian-tafika i Silver Spirit tamin'ny taona 2009, narahin'i Silver Galapagos tamin'ny 2013 ary i Silver Discoverer tamin'ny taona 2014. Ny asan'ny sambo fitsangantsanganana, Silver Muse , dia natomboka tamin'ny taona 2017 ary nanome aingam-panahy ny 'Musification' iray manontolo amin'ny fiaramanidina - ny fanavaozana ny sambo Silversea, izay mitohy. Amin'ny taona 2020, Silver Origin - sambo kanto indrindra niondrana an-tsambo tany Galapagos - ary Silver Moon dia hanatevin-daharana ny fiaramanidina, arahin'i Silver Dawn amin'ny 2021 ary ny sambon'ny sambo Evolution Class roa tamin'ny 2022.
Sakafo tsara erak'izao tontolo izao, zava-pisotro maimaimpoana manerana ny sambo, ary mpitondra kapoaka ho an'ny suite tsirairay avy dia isan'ny sasany amin'ireo fampitaovana lafo vidy izay nankafizin'ny vahinin'i Silversea hatramin'ny nanombohany ny sambo fitsangantsanganana tamin'ny 1994. Hatramin'ny Royal Caribbean Cruises Ltd. Ny fahazoana an'i Silversea amin'ny taona 2018, ireto sary manaitra ny haitraitra ireto - sy ny maro hafa - dia nohamafisin'ny Project Invictus, drafitra maharitra iray hampitomboana sy hanatsara ny sambo sambo Silversea: mankafy champagne mangatsiatsiaka sy mangatsiatsiaka ao amin'ny efitranony ireo vahiny rehefa tonga sy manerana. ny sambo; kaviara maharitra maharitra, misy 24 ora isan'andro; fanomezana manankarena amin'ny canapes, hazan-dranomasina, voaroy, ary fanapahana steak tsara; ary lisitra divay nohatsaraina, izay efa mirakitra ny tolotra fiderana lehibe indrindra any an-dranomasina.
Silversea Cruises dia mirehareha amin'ny famoronana atmosfera toa ny fianakaviana ary manararaotra ny tsingerin-taona faha-25 mba hankasitrahana ireo vahiny sy ekipa mpiompy mahatoky indrindra - izay samy nanamora ny nahatonga io dingana lehibe io. Ny olona mahatoky indrindra amin'ny vahinin'i Silversea dia samy efa nanangona mihoatra ny 2,300 25 andro Venetian Sail sahady, izay mitovy amin'ny efa ho fito taona lanin'ny sambo Silversea. Tamin'ny nanombohany, Silversea dia nanomboka tamina mpiasa miisa 2018 monina an-tany ao Fort Lauderdale ihany; tamin'ny faran'ny taona 2,571, nisy mpiasa XNUMX - ahitana mpiasa an-tsambo sy mpiasa an-tanety ao amin'ireo birao manerantany.
“Miavonavona be aho rehefa mieritreritra ny zava-bitantsika tao anatin'ny 25 taona,” hoy i Manfredi Lefebvre, talen'ny Executive Executive an'i Silversea. “Avy amin'ny sambo iray fotsiny tamin'ny 1994 ka hatrany amin'ny andian-tsambo sivy misy dimy farafahakeliny ho avy, tsy ho ela dia ho tsapantsika ny vina napetraky ny raiko rehefa nitondra fanavaozana ho an'ny indostrianay izy ary nanangana ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo. Feno fankasitrahana ireo vahiny tsy mivadika sy mpanolotsaina momba ny dia ary ireo ekipazy sy mpiasa izahay — nataon'izy ireo tanteraka izany. Miasa hatrany izahay hanosehana ny fetra fivezivezena; matokia fa vao manomboka izao. ”
“Nanatevin-daharana an'i Silversea Cruises aho tamin'ny 1994 - efa ho 25 taona lasa izay - fony enin-bolana ilay orinasa ary sambo iray monja. Tonga teto aho hatrizay, ”hoy i Fernando Barroso de Oliveira, masoivohon'i Silversea izay masoivohon'ny Fikambanana Venetian. “Ao an-trano aho. Ary mahatsapa toy izany koa ireo vahiny - fianakaviana izahay. Tianay ny mpitsainay hahatsapa ho toy ny ampahan'ny zavatra miavaka. Ny sambonay no fonenany lavitra ny tranony, satria nahavita namorona atmosfera mahafinaritra izahay. Ny ampahany lehibe amin'ny asako dia ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo vahininay ary efa nifamatotra mafy aho. Raha ny marina dia maro ny vahiny tonga nijanona niaraka tamin'ny fianakaviako sy izaho tany Portugal nandritra ny 25 taona lasa, ary nijanona niaraka tamin'izy ireo aho. Ankehitriny, rehefa tonga eny an-tsambo ny vahiny, dia manontany izy ireo raha misy mpikambana ao amin'ny ekipa - manomboka amin'ny mpivarotra bizina ka hatrany amin'ny mpanandry, mpivaro-kena ary ny mpitantana ny pisinina - dia ao an-tsambo ihany koa, satria ny olontsika dia manan-danja toy ny toerana itodiana ihany koa. Ho ahy dia mora ny mahatakatra ny antony mahatonga an'i Silversea miavaka amin'ny olona maro dia maro: ny fisakaizana, ny rendrarendra ary ny fanompoana. ”
“Fantatro ny kapiteny iray tany Silversea ary nanatona ahy izy. Efa roapolo taona aho izao tao amin'ilay orinasa, "hoy ny kapiteny Alessandro Zanello, izay nanatevin-daharana an'i Silversea Cruises tamin'ny taona 1999." Tamin'izany fotoana izany dia nanana sambo roa fotsiny i Silversea, saingy ny fahatsapana teny ambony sambo dia tsy nitovy tamin'ny sambo fitsangantsanganana hafa. . Nisy fahatsapana ny fianakaviana mafy - teo amin'ny vahiny sy ny ekipa; satria tena akaiky ny sambo dia nisy ny fifandraisana akaiky. Tsy miova izany ankehitriny. Tena nihaona tamin'ny vadiko tamin'ny Silver Spirit aho tamin'ny 2009, noho izany dia manome lanja lehibe ho an'ny orinasa aho. Tena miavaka. Iray amin'ireo fotoana nampirehareha ahy indrindra tany Silversea ny fotoana nahatongavako ho Kapitenin'ny Silver Muse tamin'ny fitokanana azy tamin'ny taona 2017 - tsy hohadinoiko mihitsy io zava-bita io. ”
Fampisehoana Delta amin'ny volana Mey 2019
Ny Luxury Collection dia manokatra trano fandraisam-bahiny voalohany any ambanivohitra anglisy